अनलाइन क्याम्पस भ्रमणहरू उपलब्ध छन्
अहिले बुक गर्नुहोस्
Nepali	English Afrikaans Arabic Moroccan Arabic Assamese Azerbaijani Belarusian Bulgarian Bengali Tibetan Bosnian Catalan Cebuano Czech Welsh Danish German Lower Sorbian Dzongkha Greek Esperanto Spanish Estonian Basque Persian Finnish French Friulian Scottish Gaelic Galician Gujarati Hazaragi Hebrew Hindi Croatian Upper Sorbian Hungarian Armenian Indonesian Icelandic Italian Japanese Javanese Georgian Kabyle Kazakh Khmer Kannada Korean Kurdish Lao Lithuanian Latvian Macedonian Malayalam Mongolian Marathi Malay Myanmar Norwegian Dutch Occitan Punjabi Polish Pashto Portuguese Rohingya Romanian Russian Sakha Sindhi Sinhala Slovak Saraiki Slovenian Albanian Serbian Swedish Swahili Silesian Tamil Telugu Thai Tagalog Turkish Tatar Tahitian Uighur Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Chinese
वुडल्याण्ड्स रोक्सबर्ग पार्क
हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरू
वुडल्याण्ड शिक्षा पत्ता लगाउनुहोस्
पोषण र स्वस्थ खाना
वुडल्याण्ड किन्डरगार्टन कार्यक्रमहरू
दर्ता गरिएको ३ वर्ष पुरानो किन्डरगार्टन
दर्ता गरिएको4वर्ष पुरानो किन्डरगार्टन
वुडल्याण्ड्स खेलकुद र योग कार्यक्रम
वुडल्याण्ड शैक्षिक कार्यक्रम
12 महिना शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत
१ देखि २ वर्षे शिक्षा कार्यक्रम
२ देखि ३ वर्षे शिक्षा कार्यक्रम
वुडल्याण्ड्स होम एप
बाल हेरचाह अनुदान (CCS)
क्याम्पस भ्रमण बुक गर्नुहोस्
वुडल्याण्ड्स लङ्ग डे केयर र किन्डरगार्टन
शिक्षा जताततै छ।
आजै भर्ना गर्नुहोस्
लामो दिन हेरचाह र किन्डरगार्टन
Woodlands Discover मा शिक्षा बाल सदन विकास सिक्दै बाल हेरचाह
हामी विश्वास गर्छौं कि शिक्षा सबै ठाउँमा हुन्छ। प्रकृतिमा इमर्सिभ ठाउँहरू र हाम्रो क्याम्पस भित्र पूर्ण सिकाउने कार्यक्रमहरूको साथ, सम्पूर्ण ग्रह हाम्रो कक्षाकोठा हो।
हाम्रो पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरू पत्ता लगाउनुहोस्
हाम्रो बाल हेरचाह र किन्डरगार्टेन कार्यक्रमहरू मार्फत, हामी विश्वव्यापी, खुसी नागरिकहरू खेती गर्न प्रतिबद्ध छौं जसले उनीहरू को हो भनेर जान्दछन्, उनीहरूका उपहारहरू बुझ्छन् र जीवनलाई आश्चर्य, आनन्द, नम्रता, र साझा गर्ने गहिरो चाहनाको साथ हेर्न सक्छन्।
6 हप्ता -3वर्ष पुरानो लामो दिन हेरचाह
वुडल्याण्ड्सले साना बच्चाहरूलाई खेल्न, सिक्न र अन्वेषण गर्न सुरक्षित र उत्प्रेरक बाल हेरचाह वातावरण प्रदान गर्दछ।
3-4 वर्ष पुरानो किन्डरगार्टन
वुडल्यान्ड्समा, हामी विश्वास गर्छौं कि दुई वर्षको पूर्ण-समय किन्डरगार्टन कार्यक्रममा पहुँच विद्यालय अघिल्लो वर्षहरूमा एक भन्दा राम्रो छ त्यसैले हामी हप्ताको5दिन3र 4-वर्ष-पुरानो किन्डरगार्टन कार्यक्रमहरू प्रदान गर्छौं।
4 -5वर्ष पुरानो किन्डरगार्टन
वुडल्यान्ड्सले उच्च गुणस्तरका किन्डरगार्टन कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ जुन विशेष गरी बालबालिकाहरू प्राइमरी स्कूलमा सरुवाको लागि शैक्षिक र भावनात्मक रूपमा तयार छन् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि डिजाइन गरिएका छन्।
पूर्ण समय शिक्षक र शिक्षकहरू
डिप्लोमा र स्नातक योग्य शिक्षकहरू। चाँडै जान्ने र माया गर्ने मानिसहरू
अभिभावक संचार एप
नि:शुल्क Xplor Home एप मार्फत दिनभरि आफ्नो बच्चाको प्रारम्भिक सिकाइ र विकाससँग सम्पर्कमा रहनुहोस्।
साप्ताहिक अभिभावक बैठकहरू मार्फत आफ्नो बच्चाको शिक्षा र विकाससँग जडान र अद्यावधिक रहनुहोस्।
साप्ताहिक खेलकुद तथा योग कार्यक्रम
हाम्रा खेलकुद र योग शिक्षक साप्ताहिक कक्षाहरू प्रदान गर्दै, बच्चाहरूलाई उनीहरूको शारीरिक र मानसिक सीपहरू अन्वेषण गर्ने अवसर छ।
3 र4वर्ष पुरानो किन्डरगार्टन कार्यक्रममा पहुँच विद्यालय अगाडि बढ्दा बच्चाहरूलाई फस्टाउने उत्कृष्ट अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
नि: शुल्क अभिमुखीकरण, सुरु गर्न नि: शुल्क
Woodlands मा सुरु गर्न र कुनै लक-इन अनुबंध, वा साइन-अप शुल्क बिना उत्कृष्ट शिक्षा पहुँच गर्न सजिलो छ।
वुडल्याण्ड्स लङ्ग डे केयर र किन्डरगार्टन बाट वुडल्याण्ड्स
हाम्रो बारेमा थप जान्नुहोस् शैक्षिक कार्यक्रमहरू।
एउटा शिक्षा जसले बालबालिकालाई आफ्नो वर्तमान र भविष्यको वातावरणमा फस्टाउन र सफल हुन सशक्त बनाउँछ।
१२ महिना पुरानो विकास समूहहरू
दर्ता गरिएको किन्डरगार्टन3-4वर्ष पुरानो
दर्ता गरिएको किन्डरगार्टन4-5वर्ष पुरानो
दैनिक कार्यक्रम, फोटो, र भिडियो अपडेटहरू
शौचालय प्रशिक्षण, योग, र खेलकुद कार्यक्रम
बाल योगात्मक मूल्याङ्कन रिपोर्टहरू
एक वास्तविक शिक्षा पत्ता लगाउनुहोस्
के अभिभावक भन्छन् ।
सुरुदेखि नै, हामीले सबै परिवारहरूका लागि उत्कृष्ट प्रारम्भिक सिकाइ शिक्षा प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।
वुडल्याण्ड्स सनबरी एक शानदार डेकेयर हो। हाम्रो छोरा त्यहाँ फस्टाउँदैछ, बाटोमा धेरै रमाइलो गर्दै र धेरै साथीहरू बनाएको छ। सबै शिक्षकहरू मात्र अद्भुत छन् र नियमित प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहोस् जुन धेरै मूल्यवान छ। आफ्ना बच्चाहरूको लागि सुरक्षित, पालनपोषण र शैक्षिक केन्द्रको खोजीमा रहेका कुनै पनि अभिभावकलाई Woodlands सिफारिस गर्नुहोस्।
हाम्रो परिवार वुडल्याण्ड्स संग धेरै खुसी भएको छ। कर्मचारी र व्यवस्थापनले एक अद्भुत सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्दछ र हाम्रो छोरा त्यहाँ फस्टाएको छ। उनले आफ्ना शिक्षक र त्यहाँका सबै शिक्षकहरूबाट सिक्ने प्रेम विकास गरे। तिनीहरूले अद्भुत सेवा प्रदान गर्छन् र तिनीहरूको प्रणालीहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ र आमाबाबुलाई सूचित राख्नुहोस्। अत्यधिक सिफारिश!
दुर्लभ क्रोमोजोम मेटिएको बच्चाकी आमाको रूपमा, मलाई मेरो छोरी सुरक्षित र राम्रोसँग हेरचाह गरिएको सुनिश्चित गर्ने बाल हेरचाह प्रदायक खोज्नु आवश्यक छ। वुडल्याण्ड्सका शिक्षक र कर्मचारीहरूले ठ्याक्कै त्यसै गरेका छन्। मेरी छोरीले विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू नखाएर, धेरै शब्दहरू नबोली र आफ्नो विकासको पछि लागेकी वुडल्याण्डमा सुरु गरिन्।7महिनामा उनले अब सर्भ गरिएका सबै चीजहरू राम्रोसँग बोल्न सक्छिन् र आफ्नो कोसेढुङ्गाहरू पूरा गरिरहेकी छिन् र त्यो वुडल्याण्ड्स र तिनीहरूका कर्मचारीहरूको काम हो। मेरो छोरीको लागि सबै सहयोगको लागि म तिनीहरूलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन।
वुडल्याण्ड्स र यो एक महान बाल हेरचाह केन्द्र। तिनीहरूले शिक्षा र सिकाइ, साथै दिनचर्यामा राखेको महत्त्वको हामी कदर गर्छौं। कर्मचारीहरू सबै धेरै मिलनसार छन्, र हाम्रो बच्चाको हेरचाह गर्छन्, र सधैं हाम्रा सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्छन्। सुविधा नयाँ र सफा छ जुन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। साथै तिनीहरूको दैनिक मूल्य धेरै उचित छ। हामी परिवारहरूको लागि यो बाल हेरचाह अत्यधिक सिफारिस गर्छौं।
म र मेरो श्रीमान् र हाम्रो सानो मान्छे नोआहले वुडल्याण्ड्स रक्सबर्ग पार्क किन्डरगार्टनलाई कत्तिको कदर गर्छौं भनेर भन्न चाहन्छु! तिनीहरूको मित्रवत कर्मचारीहरूको लागि मात्र होइन तर धेरै न्यानो स्वागतको लागि नूहले आफ्नो पहिलो दिनमा अहिलेसम्म गरेको थियो। वुडल्याण्ड्समा नूहको समयको माध्यमबाट हामी धेरै खुसी छौं। तपाईंले वुडल्याण्ड्समा प्राप्त गर्नुभएको गुणस्तर अचम्मको छ र कर्मचारी, सञ्चार र वुडल्याण्ड्समा उनको समग्र अनुभवबाट धेरै खुसी थिए। नूहले वुडल्यान्ड्स रक्सबर्ग पार्कमा उपस्थित हुँदा धेरै बढेको र सिकेको छ र अन्य बच्चाहरू मात्र होइन कर्मचारीहरूसँग मित्रता बनाएको छ। म वुडल्यान्ड्स किन्डरगार्टनलाई पनि मेरो साथीहरू र बच्चाहरूसहितको परिवारलाई सिफारिस गर्छु।
प्रतिष्ठित प्रारम्भिक बचपन स्कूल
Woodlands एक विशिष्ट प्रारम्भिक बाल्यकाल विद्यालय, बाल हेरचाह, र अष्ट्रेलियाको संघीय र राज्य सरकारहरू द्वारा मान्यता प्राप्त किन्डरगार्टन हो।
Woodlands एउटा समावेशी समुदाय हो जहाँ हामी सचेत सिर्जनाकर्ताहरूलाई संलग्न, चुनौती र समर्थन गर्छौं।
नीतिहरूटोलीलाई भेट्नुहोस्स्रोतहरूवर्दी पसलहामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
आन्तरिक पोर्टलकार्यक्रमहरूहाम्रो टोलीमा सामेल हुनुहोस्स्रोतहरूउत्पादनहरू
आन्तरिक पोर्टलआईप्याड पोर्टलटोलीलाई भेट्नुहोस्नामांकन सर्तहरूहामी भर्ती गर्दैछौं!
वुडल्याण्ड्स लङ्ग डे केयर र किन्डरगार्टन © सबै अधिकार सुरक्षित